Baolina kitra – «CAN 2019» :: Feno fahavononana tanteraka ny Barea • AoRaha
Baolina kitra – «CAN 2019» Feno fahavononana tanteraka ny Barea
Fandresena no tanjona. Ao anatin’ny faha- vononana tanteraka ny ekipam-pirenena malagasin’ ny taranja baolina kitra na ny Barean’i Madagasikara, izay hiatrika ny lalao ampaha- valon-dalana hiadiana ny amboaran’i Afrika (CAN) hihaonana amin’ny Léopards avy any amin’ny Repoblika demokratikan’i Congo (RDC), rahampitso ao amin’ny kianjan’ i Alexandrie (Ejypta). Miakatra ambony hatrany hambom-po sy toe-tsaina amin’ny fikatsahana vokatra tsara eo amin’ireo mpilalao sy ny mpitantana teknika rehetra. Inoana ny fitomboan’ny faharisihana avy amin’ireo Malagasy an-jatony ho tonga hanohana ny Barea, any Ejipta.
«Ataontsika amin’ny fo madio io lalao io. Mametraka ny Barea ho fianakaviana kely izahay. Isika rehetra miaraka no hahalavo ny Léopards. Vao mainka manome hery anay ny fahatongavan’ny fiaramanidina manokana mitondra Malagasy hanohana ny ekipam-
pireneny », hoy i Abel Anicet Andrianantenaina, irakiraka malagasy tafiditra ho isan’ ireo mpilalao mandrafitra ny ekipan’ny CAN 2019 taorian’ ny fifanintsanana.
“Ekipa tsara ny an’ny Repoblika Demokratikan’i Congo. Mafy izy ireo amin’ ny tanjaka ara-batana sy amin’ ny ankapobeny. Nandresy ny laharana faha-45 maneran-tany anefa isika, koa nahoana no tsy afaka mandresy ny laharana faha-49?”, hoy i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barean’i Madagasikara. Nanana fotoana tsara ny ekipam-pirenena malagasy nentina nanomana an’ity lalao rahampitso ity.
“Nojerenay ny lesoka rehetra tamin’ireo lalao vitanay, tamin’ ny alalan’ny tomban’ezaka, nandritra fifanintsanana isam-bondron. Notsaboina ireo naratra rehetra. Andrasana ny fiverenan’i Pascal Razaka- nantenaina na Bapasy, i Jeremy Morel ary Jerôme Mombris. Hilalao isika amin’io ary fandresena no tanjona”, hoy hatrany itsy mpanazatra frantsay itsy.
Momba an’ireo amboara an’olon-tokana dia nambaran’ i Abel Anicet fa: “fanampiny fotsiny ireny ary tsy tokony hoeritreretina fa ny tena mifantoka ao an-doha dia ny hahalasa lavitra ny Barea amin’ity fifaninanana ity”. “Hanome ny fara-fahaizanay izahay amin’io lalao io. Izay resy eo dia mihintsana avy hatrany. Noho izany, tsy maintsy mandresy no tanjona ary vitantsika izany, vokatry ny fiarantsika mirona”, hoy izy.
Raha ireo vina napetraka tany am-piandohan’izao fifaninanana kaontinantaly izao dia efa azo heverina fa tanteraka satria ny ho eo amin’ny dingan’ny ampaha- valon-dalana aloha no napetraky ny mpanazatra nasionaly, Nicolas Nupuis, ho tanjona. “Rehefa
tratrantsika ny dingan’ny ampahavalon-dalana dia inoana ny hihoarana hatrany amin’izay faran’ny lavitra indrindra. Nahoana moa no tsy hieritreritra ny hahazo amboara? Matoa mifaninana dia io no tanjona”, hoy hatrany izy.